Semalt Expert Blocker Advice: Fomba 5 hanakana ireo tranokala amin'ny Chrome
Loharanom-baovao tena tsara ny tranonkala, fa ny fanakanana pejy tsy ilaina, ahiahiana ary olon-dehibe dia tena ilaina amin'ny fiarovana antsika amin'ny aterineto. Indraindray ireo mpiserasera dia alefa mankany amin'ny blaogy hafahafa na ny votoatin'ny tranonkala, ary voatery izy ireo hanao sonia ny tolotra. Raha toa ka mahazatra ireo olana ireo dia tokony hanakana ny tranonkala hafahafa rehetra ao amin'ny tranonkalanao Google Chrome ianao.
Eto i Michael Brown, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia niresaka fomba 5 mahavariana sy malaza hanakanana tranokalan'ny Chrome.
1. Hamorona ny profesora mpampiasa
Ny safidy voalohany sy tsara indrindra dia ny mamorona profesora mpampiasa. Ny fomba fiasan'io fomba io dia tsy mitaky fanitarana izany, izay midika fa afaka misoroka mora foana ny zanakao amin'ny fitsidihana tranokala tsy filàna na olon-dehibe. Amin'ny alalan'ity profilà ity, dia afaka manara-maso mora kokoa ianao hoe inona no tranonkala na apps dia tsy misy fiarovana ho an'ny fianakavianao ary avahan'izy ireo misakana avy hatrany. Raha te hanova izany ao amin'ny Google Chrome, tsindrio ny menu-nao telo ao amin'ny Settings, ary eo ambanin'ny sehatry ny olona, ​​kitiho ny safidinao manara-maso. Eto dia tsy maintsy manampy olon-kafa ianao ary mifantina ny safidin'ny Tetezamita alohan'ny hamonjena ireo fanovana. Farany, mandehana any amin'ny "Manage" ary tsindrio ny safidy azo aloa hanamarina raha noforonina na tsia ny mombamomba anao.
2. Blocklist an'ny Personal
Io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra sy tsotra indrindra hanakanana ireo tranonkala ao amin'ny Google Chrome. Raha mikasa ny hanakana ny vohikala amin'ny voka-pikarohana Google ianao, ny Blocklist an'ny tena manokana no fampivoarana tsara ho anao ary i Google dia nanome izany ho an'ireo mpampiasa azy erantany..Rehefa tafapetraka tanteraka ianao, dia afaka mandray soa avy amin'ity safidy maro ity ianao, toy ny mandeha any anaty tabilao ary manakana ny tranokala izay tsy tianao ny ankizy hivezivezy. Ao amin'ny ambany ianao, dia hahita ny safidin'ny tranokala voasakana, izay azonao andefasana entana hikarakarana ireo pejy rehetra voasakana.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny tranokalan'ny Block dia ny maha-azo itokiana azy sy azo itokisana. Raha vantany vao nandamina ireo tranonkala voasakana, mora ho anao ny manampy ny tenimiafina ao amin'ny tranokalan'ny Block Site mba tsy hahatongavan'ny zanakao amin'ireo tranonkala voasakana na lahatsoratra. Raha vantany vao nametraka ity extension ity ianao dia mandehana ao amin'ny safidy Settings ary ampio tranokala tianao halavina. Ny safidy manaraka dia ny manindry ny boaty Authentication Enable ary tsy manadino ny mamaritra ny tenimiafinao alohan'ny hamonjena ny fanovana.
Azo antoka fa StayFocusd no tsara indrindra sy iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra manakana ireo fikandrana amin'ny mpampiasa Chrome. Izy io dia miasa tsara amin'ny kaonty Facebook anao sy Gmail ary mametra ny fotoana laninao amin'ny tranokala olon-dehibe. Sarotra ny mamaritra ny ora na ny andro StayFocused dia tokony hametra ny fihetsiketsehana. Ankoatra izany, afaka mamorona lisitr'ireo tranonkala voasakana sy havaozina ianao. Safidy iray hafa ny safidy nokleary. Izany dia hanampy anao hametra ny tranonkala ahiahiana mandritra ny volana vitsivitsy na taona.
5. Ny Nanny ho an'ny Google Chrome
Ny naniny dia fanitarana sarobidy izay misy safidy sy karazana. Manampy ireo mpamorona ny tranonkala izy io, mamaritra ny fotoana tokony handoavanao ao amin'ny pejy web ary handamina ny fisakanana amin'ny lafiny iray. Miaraka amin'ny Nanny ho an'ny Google Chrome, afaka manakana tranokala maro araka izay tianao ianao. Mandehana fotsiny ao amin'ny safidy URL Blocks ary ampio ny tranonkala azonao atao. Azonao atao ny mamaritra ny fotoana tianao hanakanana tranonkala manokana. Tsindrio ny bokotra Save raha vao vita ianao Source .